Caro ka dhalatay booqasho ay Itoobiya ku tagayaan dadka isku jinsiga ah ee isu galmooda - BBC News Somali
Caro ka dhalatay booqasho ay Itoobiya ku tagayaan dadka isku jinsiga ah ee isu galmooda
Lahaanshaha sawirka BBC/GEORGE WAFULA
Image caption Qoshaha ayaa ku saabsan dalxiis
Wadaad diimeedyada kaniisadaha dalka Itoobiya ayaa dowladda ka dalbaday inay is-hortaagto booqasho la qorsheynayo inay dalkaas ku tagto hay'ad taageerta dadka isku jinsiga ah ee isguursada.
Arrinta sida gaarka ah looga carooday ayaa ah in hay'adda oo lagu magacaabo Toto Tours ay damacsan tahay inay dadkaas dalxiis ku geyso meelo ka mid ah Itoobiya oo ay ku jiraan goobaha diimaha, sida kaniisadaha taariikhiga ah.
"Waxaan nahay dad dabacsan oo wax jecel, niyaddeena kuma jirto inaan wax dhibaato ah sameyno, ma jirto cid aan waxyeello u geysaneyno, haddana sidaas oo ay tahay waxaan la kulannaa hanjabaado iyo khatar," ayuu yidhi Dan Ware oo u warramayay laanta af Amxaariga ee BBC-da.
Mr Ware ayaa sheegay inuu aad u cabsanayo, isagoo wasaaradda dalxiiska ee Itoobiya ku boorriyay inay "taxadar sameyso".
"Indhaha caalamka oo dhan ayaa na eegi doona markaan imaanno, dhib kasta oo naloo geystana wuxuu ka turjumi doonaa dhaqanka Itoobiya iyo waaxda dalxiiska ee waddankaas", ayuu sii raaciyay.
Image caption Kaniisaddan ayaa ka mid ah kuwa taariikhiga ah
'Ma aha in loo oggolaado inay raadkooda reebaan'
Selestu Me'et oo ah guddoomiyaha urur ay ku bahoobeen kaniisadaha ayaa BBC-da laanteeda af Amxaariga u sheegay in dowladda Itoobiya "looga baahan yahay inay dadkaas ka mamnuucdo soo galitaanka dalkooda iyo booqashada ay ku tagayaan goobaha barakeysan".
"Ma aha in loo oggolaado inay raadkooda reebaan", ayuu yidhi Dereje Negash, oo isagana ka mid ah hoggaamiyeyaasha masiixiyiinta ee wada ol'olaha ka dhanka ah dadka isku jinsiga ah ee isguursada.
"Diinteennu way kasoo hor jeeddaa ficilkan, waana wax aan la aqbali karin".